OoVimba baseIndiya-Funda ukuRhweba
I-RBI ibiza i-Ban ye-Crypto, ithi i-Ban ye-Packing iya kuphumelela
I-Reserve Bank yaseIndiya (i-RBI) isandul 'ukuhlala kwintlanganiso yayo ye-592 yebhanki ephakathi yabalawuli ekhokelwa nguRBI uRhuluneli uShaktikanta Das. Ibhodi ePhakathi yeyona komiti iphezulu yokwenza izigqibo kwi-RBI.
Igqiza lixoxe ngeemeko ezikhoyo zezoqoqosho zasekhaya nehlabathi jikelele, imingeni eguqukayo, kunye namanyathelo okujongana nemiba yoqoqosho ehlala ihleli. Abalawuli bathetha nangemiba enxulumene ne-cryptocurrency kunye nemali yedijithali yebhanki ephakathi (CBDC).
Kwintlanganiso, i-apex bank ixelwe ukuba ixhasa ukuvalwa okuthe ngqo kwe-cryptocurrencies, iphikisa ukuba ukuvalwa okukodwa akuzukuvelisa kakhulu. I-Economic Times ibonakalise uphuhliso ngoLwesihlanu, iphawula ukuba ulwazi luvela kwimithombo engaziwayo echaphazelekayo kwiingxoxo.
Ngeli xesha, amagosa aphezulu e-RBI akhankanya iindawo ezininzi zenkxalabo enxulumene ne-cryptocurrency, kubandakanya ukulandeleka kwentengiselwano, uqikelelo, ukuguquguquka okukhulu kwexabiso, imiba yezomthetho, kunye nokuchonga izazisi emva kwentengiselwano.
Irhuluneli ye-RBI ithi i-Crypto idodobalisa uQoqosho
I-Das yathatha ithuba lokuphinda i-anti-crypto ukuma kwayo, igxininisa ukuba i-cryptos ibeka izisongelo eziphawulekayo kuyo nayiphi na inkqubo yezemali, ecinga ukuba ayilawulwa yibhanki ephakathi.
I-RBI iRhuluneli iye yaxoxisana ngokuphindaphindiweyo ukuba i-RBI ine-reservations acute against cryptocurrencies, iphawula ukuba ibeka isoyikiso kwi-macroeconomic yesizwe sase-Asia kunye nokuzinza kwemali. Ngo-Okthobha, uDas waxoxa wathi: "Kukho imfuneko yeengxoxo ezinzulu kakhulu (kwi-crypto). Xa ibhanki ephakathi isithi inenkxalabo enzulu ukusuka kwinqanaba loqoqosho olukhulu kunye nokuzinza kwezemali, kukho imiba enzulu kakhulu ebandakanyekayo eyinxalenye yoku. "
Njengoko besixele ngaphambili, i-Cryptocurrency kunye nokuLawulwa kweBhili yeMali yeDijithali esemthethweni ka-2021 iya kuxoxwa yiLok Sabha (indlu ephantsi yepalamente yaseIndiya) ngoFebruwari 2022. Urhulumente waseIndiya uxelwe ukuba unezicwangciso zokulawula utshintshiselwano lwe-crypto kunye neSecurities and Exchange. Ibhodi yaseIndiya (SEBI) eyongamela inkqubo yolawulo. Nangona kunjalo, umthetho oyilwayo ujolise ekuthinteleni ukusetyenziswa kwe-cryptocurrency kwiintlawulo.
Kukho amabango okuba urhulumente uceba ukuwuphinda awusebenzise lo mthetho uyilwayo kwaye usenokuwuzisa kwiseshoni yohlahlo lwabiwo-mali kunyaka ozayo.
tags Cryptocurrency, Indiya , iindaba, RBI, IMIMISELO
I-Indiya ukwenza uhlengahlengiso kwi-Crypto Bill ecetywayo ngoFebruwari
Iingxelo ezintsha zibonisa ukuba urhulumente we Indiya izicwangciso zokuphumeza ezinye iinguqu kwibhili ye-crypto ephikisanayo. I-crypto bill-i "I-Cryptocurrency kunye noLawulo loMthetho osaYilwayo weMali weDijithali osemthethweni wowama-2021"—iwela kuluhlu lwemithetho eza kuqwalaselwa kwiseshoni yasebusika yepalamente.
Ngokutsho kweBusiness Today ngoLwesine, igosa eliphezulu likarhulumente liqaphele ukuba urhulumente ucinga ukwenza uhlengahlengiso kumthetho oyilwayo kwaye kufuneka aphinde awubuyisele kwiseshoni yohlahlo lwabiwo-mali ngoFebruwari. Igosa likarhulumente elingachazwanga igama longeze lathi:
"Iingxoxo ziyaqhubeka kwaye imiba ephambili efana nokuphathwa kwee-cryptocurrencies zabucala, ingqiqo yolawulo kunye nezenzo zehlabathi [ziyajongwa kwakhona."
Oko kuthethiweyo, urhulumente waseIndiya kutshanje ubhale zonke ezingezizo ii-CBDCs "I-cryptocurrencies yabucala," kuquka i-Bitcoin kunye ne-Ethereum.
Inethiwekhi yeendaba zendawo i-NDTV ibike iindaba ezifanayo ngoLwesithathu emva kokutyhila ukuba urhulumente uceba ukwenza uhlengahlengiso oluthile kwi-crypto bill. Ukucaphula iimbekiselo ezivela kwimithombo engachazwanga, i-NDTV yaphawula ukuba urhulumente ufuna ukuba umthetho we-cryptocurrency wesizwe saseAsia uhambelane nesakhelo sehlabathi kodwa ufuna ukuthatha ixesha lakhe lokufumana umthetho we-crypto ngokufanelekileyo. Upapasho longeze ukuba:
"Olunye utshintsho lunokwenzeka kwi-crypto bill ... kwaye iZiko linokucinga ngokuzisa ummiselo okanye umyalelo okhethekileyo emva kweseshoni."
I-Indiya ukuVantya ukusetyenziswa kwe-Crypto ngaphandle koTyalo-mali / iNtelekelelo
Umphathiswa wezemali e-India, u-Nirmala Sitharama, kutshanje uye wathi ibhili ecetywayo kufuneka iphinde iphinde iphinde ifakwe kwikhabhinethi. I-crypto bill yangoku ifuna "Ukuthintela zonke ii-cryptocurrencies zabucala eIndiya, nangona kunjalo, ivumela iimeko ezithile ukukhuthaza itekhnoloji esisiseko ye-cryptocurrency kunye nokusetyenziswa kwayo," ngokwe-ajenda yomthetho ebusika bendlu ephantsi yepalamente, Lok Sabha.
Nangona kungekho zinkcukacha ezisemthethweni ze-bill ezipapashwe okwangoku, iingxelo zibonisa ukuba i-India iceba ukulawula ishishini le-crypto kwindawo yalo yokulawula, kunye ne-Securities and Exchange Board of India (SEBI) ejongene nenkqubo yokulawula. Kwakhona, ilizwe liceba ukuvala ngokuthe ngqo ukusetyenziswa kwe-crypto yokuhlawula ngaphakathi kwemida yalo kwaye ubeke umhla wokugqibela kubatyali-mali ukuba bavakalise iimpahla zabo ze-crypto okanye ixesha lokuvalelwa entolongweni ngaphandle kwebheyili.
tags Cryptocurrency, Indiya , iindaba, IMIMISELO
I-Indiya iyakuValela ukusetyenziswa kwe-Cryptocurrency njengeSicombululo seNtlawulo
Ngokutsho kwengxelo ngoLwesibini, urhulumente waseIndiya ucebise ukuvalwa okuthe ngqo kokusetyenziswa kwe-cryptocurrency njengesisombululo seentlawulo kwaye ubeke umhla wokugqibela kubatyali-mali bendawo ukubhengeza ukubanjwa kwabo okanye ukujongana nezohlwayo eziqatha, kubandakanya ixesha lokuvalelwa entolongweni ngaphandle kwesiqinisekiso okanye ibheyile.
Ukongeza, ibhilikhwe entsha ye-cryptocurrency inokuyalela inkqubo yobhaliso yolwazi-yakho-umthengi (KYC) kuzo zonke ii-crypto exchanges. Nangona kunjalo, urhulumente akakakuvezi esidlangalaleni okubhalwe kulo mthetho uyilwayo.
Ingxelo yacacisa ukuba ngelixa ukusetyenziswa kwe-crypto kwiintlawulo akusayi kuphinda kufumaneke, imisebenzi yokuthengisa / utyalo-mali iya kuhlala kodwa iya kulawulwa ngakumbi. Ngaloo ndlela, i-crypto bill ecetywayo iya kunika imeko yezomthetho ye-cryptocurrency kwisizwe saseAsia.
IReuters iphinde yaveza ukuba umthetho ocetywayo uphawule ukuba imigaqo iya kuba "iyabonakala." Umthetho oyilwayo wachaza ukuba:
“Urhulumente waseIndiya uceba 'uthintelo ngokubanzi kuyo yonke imisebenzi eyenziwa nguye nawuphi na umntu emigodini, ekwenzeni, ekubambeni, ekuthengiseni, (okanye) ekuthengiseni' ngeemali zedijithali 'njengeyona ndlela yokutshintshiselana, ukugcinwa kwexabiso kunye neyunithi yeakhawunti.' ”
I-Reuters yongeze ukuba umthombo wayo uveze iiwallet zokuzigcina zinokuvalwa ukuba ityala liyadlula. Nangona kunjalo, i-CEO yotshintshiselwano oluphezulu lwe-cryptocurrency e-Indiya iye yaqinisekisa ukuba oku kunokuba nzima, ngenxa yobume becandelo.
Yonke imisebenzi yeCrypto iza kujongwa yiBhodi yoKhuseleko kunye noTshintshiselwano lweBhodi yaseIndiya
Njengoko kukhankanyiwe ngaphambili, The Economic Times ingxelo ngoLwesithathu ukuba ibhili ecetywayo iya kugunyazisa ukutshintshiselana crypto ukunamathela ukwazi-umthengi (KYC) template kunye nokwabelana ngedatha kunye nee-arhente zolawulo, kuquka Securities and Exchange Board of India (SEBI), iReserve Bank of India (RBI), kunye nesebe lerhafu yengeniso.
Kwirhafu ye-cryptocurrency, ingxelo iveze ukuba urhulumente waseIndiya unokongeza i-crypto kwiCandelo le-26A yoMthetho weRhafu yeNgeniso kuhlahlo lwabiwo-mali oluzayo, eqinisekisa ukuba isenzo siya "Kufuneka abahlawuli berhafu baveze utyalo-mali lwabo lwe-cryptocurrency eIndiya nakwamanye amazwe."
Kwiveki ephelileyo, womnatha weendaba Indian-based NDTV wabhengeza ukuba wathatha ukrozo kwinqaku lekhabhinethi karhulumente, ecebisa ukuba SEBI ukongamela imisebenzi cryptocurrency kwisizwe Asian.
Ukongeza, uMphathiswa wezeMali waseIndiya uNirmala Sitharaman utyhile kwiveki ephelileyo ukuba i-crypto bill yasekuqaleni, ebifuna ukuvala yonke imisebenzi ye-crypto eIndiya, ayiphumelelanga kwaye yaphinda yasebenza. Umphathiswa uphinde waphendula kwimibuzo emininzi malunga nomgaqo ocetywayo we-cryptocurrency.
Icandelo loMphathiswa Wezimali waseIndiya licacisa imeko kwiMicimbi yeDijithali yemali kweli lizwe
Icandelo loMphathiswa Wezimali waseIndiya uphendule imibuzo ecinezelayo malunga nenqanaba lemisebenzi kunye nemigaqo yelizwe yeli lizwe ngoMvulo. Ubuphathiswa baphendule kuthotho lwemibuzo evela kwi-Lok Sabha, indlu esezantsi yepalamente yase-India, malunga nemicimbi ethile ye-crypto. Umphathiswa wesebe lezemali uveze ukuba izindululo ezikwidrafti yomthetho oyilwayo eziphakanyiswe yikomiti yabaphathiswa (i-IMC) zisaphononongwa.
Umbuzo wokuqala ubandakanyekile "Ubume bentengiso yedijithali eIndiya." UMphathiswa kaRhulumente weSebe lezeMali, uShri Pankaj Chaudhary, uphendule wathi: "Olu lwazi aluqokelelwa ngurhulumente."
Impendulo kaChaudhary iyangqinelana noko umphathiswa wezemali aphawulileyo kutsha nje, eyokuba urhulumente akanayo idatha eqokelelweyo ngenani lotshintshiselwano nge-crypto okanye abarhwebi eIndiya.
Umbuzo wesibini ubandakanyekile "Ulawulo olukhoyo ngoku lokujikeleza kwemali yedijithali kunye norhwebo lwayo." U-Chaudhary ucacisile ukuba yonke imibutho ephantsi kwe-Reserve Bank yase-India (i-RBI), ifumene izaziso zokuphumeza ukukhuthala okwaneleyo kubathengi ngemithetho ethile, kubandakanya iimfuno zabaThengi bakho (i-KYC), umthetho wokuchasana nemali (AML), Uthintelo zoMthetho oGunyazisa iMali (i-PMLA), kunye noMthetho woLawulo loTshintshiselwano lwaNgaphandle (i-FEMA) zorhwebo lwangaphandle.
Umphathiswa emva koko wabuzwa malunga nemithetho ekhoyo ukukhusela abathengisi bemali kunye nabatyali mali "Kubuqhophololo nakwezinye izinto ezingahambi kakuhle kurhwebo lwayo," Uphendule wathi:
"Kuxhomekeke kubuqhophololo, imithetho eyahlukeneyo kubandakanya neKhowudi yePenali yase-1860, ikho ukuze ikhuseleke kubuqhetseba."
Urhulumente waseIndiya akazamkeli iiCryptos njengeThenda yezoMthetho
Imibuzo emithathu yokugqibela ibandakanye uqikelelo "Ingaba urhulumente uzimisele ukungenisa imigaqo ethile ethengisa kurhwebo lwemali e-India."
Umphathiswa uphendule le mibuzo esithi:
"Urhulumente akayithathi imali ithenda esemthethweni okanye ingqekembe yemali engemali kwaye uzakuthatha onke amanyathelo okuphelisa ukusetyenziswa kwezi mali ze-crypto ukuxhasa ngemali izinto ezingekho mthethweni okanye njengenxalenye yenkqubo yokuhlawula."
Ngeli xesha, umphathiswa wongeze ukuba i-IMC "Kunconywe kwingxelo yayo ukuba zonke ii-cryptocurrensets zabucala, ngaphandle kwayo nayiphi na imali yedijithali ekhutshwe ngurhulumente, mayithintelwe eIndiya." Umphathiswa uqaphele ukuba:
"Urhulumente uzakuthatha isigqibo ngezindululo ze-IMC, kwaye nesindululo somthetho, ukuba sikhona, siyakwaziswa epalamente emva kwenkqubo efanelekileyo."
tags Cryptocurrency, Indiya , iindaba
Iibhanki zaseIndiya iiSideline zeNkampani zeCrypto ngaphandle kokucaciswa kweRBI
Iibhanki ezininzi zaseIndiya ziyaqhubeka ukunqumamisa ukunikezela ngeenkonzo kubathengi abasebenza ngee-cryptocurrensets, ngaphandle kwememo yeReserve Bank of India (RBI) yokuba ukuvalwa kwayo kwe-crypto akusasebenzi.
Ngokwengxelo yakutshanje yeLivemint, i-IDFC First Bank ijoyine uluhlu olukhulayo lweebhanki zorhwebo zaseIndiya ezinqumamisa iinkonzo zazo kwiinkampani ezisekwe kwi-crypto. Ingxelo yaqaphela ukuba:
"IDFC Bank yokuqala kule veki iphelileyo iyekise okwethutyana iinkonzo, njengoko isenza oku ngokuzimisela okukhulu malunga nenkxaso yeebhanki kutshintshiselwano nge-crypto."
Kutshanje i-RBI icacisile ukuba amaziko emali akunyanzelekanga ukuba alandele isetyhula ka-Epreli 2018 yokuthintela iibhanki ekunikezeleni ngeenkonzo kumashishini ahambelana ne-crypto, ephawula ukuba ayisebenzi kwaye akufuneki icatshulwe okanye icatshulwe. Ibhanki ephezulu yongeze ukuba iibhanki zinakho "Qhubeka nokwenza abathengi ngenxa yeenkqubo zokukhuthala" ngokuhambelana nemithetho esele ikho.
Ezinye iiBhanki zaseIndiya ziyaziqaqambisa kwi-Crypto
Upapasho lweLivemint lukwaphawule ukuba ezinye iibhanki ezinqumle amaqhina zaza zaziqhelanisa neenkampani ezinxulumene ne-crypto zibandakanya i-ICICI Bank, Ewe Bank, kunye nePaytm Payment Bank. Okwangoku, i-HDFC Bank kunye ne-State Bank yase-India (i-SBI) bacebise abathengi babo ngokuchasene nemingcipheko yokujongana ne-cryptocurrensets ngenxa yendalo yabo engalawulwa.
Nangona kunjalo, i-Bitcoin kunye nezinye i-cryptocurrensets azivinjelwanga e-India, njengoko kuqinisekisiwe ngurhulumente kunye ne-RBI.
Nangona kunjalo, urhulumente wase-India usafuna ukuyila i-cryptocurrency bill, ekufanele ukuba yazisiwe ngexesha leseshoni yohlahlo lwabiwo mali epalamente kodwa ayibanga njalo. Oko bekutshiwo, kukho iincoko zikarhulumente zokuhlanganisa ipaneli yeengcali ukuphinda iphonononge izindululo kumthetho osayilwayo wangoku.
Ngokuka-Livemint, i-CEO kunye nomsunguli we-Exchange Unocoin, uSathvik Vishwanath, utshilo "I-IDFC Bank ijoyina ezinye zeebhanki ezizimeleyo ezithathe amanyathelo [hayi] kwinkonzo ezisekwe kwi-cryptocurrency." I-CEO yongeze ukuba:
“Ngelixa i-RBI icacisile ukuma kwayo ukuba iibhanki zinganikezela ngeenkonzo emva kokukhuthala kwazo, kuyaphambana ngequbuliso kwezi bhanki ukubuyisa unyawo. Olu hlobo lokuphendula luyabothusa abatyali mali bee-cryptocurrencies ngesizathu esingalunganga. ”
tags Cryptocurrency, Indiya , iindaba, RBI
Abarhulumente baseIndiya baphinde baqwalasele ukuvalwa kwee-cryptocurrencies
Urhulumente wase-India uxelwe ngokucinga kwakhona ngokuthintela ukusetyenziswa kwe-crypto kulawulo lwakhe kwaye ngoku ucinga ngendlela elula yokulawula. Ngokwolwazi lwangaphakathi, urhulumente wenze ipaneli entsha yeengcali ukuphuhlisa isakhelo sokulawula ukusetyenziswa kwemali ye-cryptocurrency.
Isigebenga saseAsia sihleli singazinzanga kwimizamo yayo ngokubhekisele kwi-cryptocurrency kangangeminyaka eliqela. Kwi-2018, iBhanki enguVimba yaseIndiya yayalela zonke iinkampani ezihlangeneyo ukuba ziyeke ukusebenza ngeeasethi zedijithali. Kodwa ke, kuphela emva kweminyaka emibini, iNkundla Ephakamileyo yaseIndiya yasirhoxisa isalelo.
Ngaphandle komdla omkhulu kwi-cryptos ngabemi bayo, abasemagunyeni e-India bayaqhubeka nokuchasana nokukhula kwayo elizweni. Urhulumente ubhengeze ngo-Matshi ukuba uza kuyaphula umthetho ukuthengiselana kwemali kweli lizwe.
Ngokwe-The Times yezoQoqosho, ilizwe litshintshile imeko yalo yokuchasana ne-crypto kwaye lijonga amanyathelo olawulo endaweni yoko. Ibhekisa kwimithombo emithathu yangaphakathi, ingxelo iqaphele ukuba abasemagunyeni "Unokwenza iphaneli entsha yeengcali zokufunda malunga nolawulo lokugcina imali kwi-Indiya" endaweni yokuvalwa ngokungqalileyo.
Isityholo esitsha siza kujongana neengcebiso zangaphambili ezazenziwe ngulowo wayesakuba ngunobhala wezezimali uSubhash Garg ngo-2019. Ikomiti entsha yathi imigaqo yakudala iphelelwe lixesha.
Urhulumente wase-India ukuba aPhuhlise i-CBDC
Umntu ongaphakathi ngaphakathi oqheleneyo nophuhliso olutsha uxelele I-Economic Times ukuba:
"Kukho umbono ngaphakathi kurhulumente wokuba iingcebiso ezenziwe ngu-Subhash Garg zibhalwe umhla, kwaye kufuneka kujongwe ngokutsha ekusetyenzisweni kweekhristos endaweni yokuthintela ngokupheleleyo."
Abangaphakathi babanga ukuba ukunyuka kwamanani erhwebo kutshanje ngabarhwebi balapha kubangele ukuba isebe lezemali litshintshe imeko yalo.
Ukongeza, ikomiti iya kusebenzisa i-blockchain ye “Ukuphuculwa kwetekhnoloji” kunye nokuphuhlisa iindlela ezintsha zokulawula i-cryptocurrency njengeeasethi zedijithali endaweni yeemali.
Okwangoku, injongo yekomiti ibandakanya ukusebenzisana nebhanki ephambili ekuphuhliseni nasekukhupheni i-digital rupee (CBDC).
ICoinbase ibhengeza ulwandiso eIndiya ngaphandle kokungaqiniseki ngokulawulwa kweli lizwe
Ukuhlaziywa: 30 Matshi 2021
Umqhubi owaziwayo otshintshiselana ngee-cryptocur lwemali, uCoinbase, kutshanje ubhengeze ukuba izokwandisa ukusebenza kwayo iye eIndiya. Inkampani ikwabhengeze ukuvuleka kwemisebenzi emininzi yokwandiswa kwe-Indiya ngaphandle kokubonisa ukuba urhulumente uceba ukuvala ukusetyenziswa kwemali ye-cryptocurrency.
Coinbase uqaphele kwisibhengezo sayo esisemthethweni ukuba:
“Siyavuya ukwazisa ukuba uCoinbase useka ubukho beshishini eIndiya. Ngokugcina ezinye iinkonzo ze-IT, kubandakanya ubunjineli, uphuhliso lwesoftware, kunye nemisebenzi yokuxhasa abathengi eIndiya, siyakuxhamla kwicandelo labo elikhulu leetalente ezikumgangatho wehlabathi wobunjineli. ”
Isibhengezo songeze ukuba:
"I-India kudala yaziwa njengeziko lobunjineli kunye nezinto ezintsha zetekhnoloji, kwaye sijonge phambili ekufumaneni italente ekumgangatho wehlabathi ukunceda iqela laseCoinbase liphuhlise iindlela ezintsha zokuba abathengi bethu banxibelelane noqoqosho lwe-crypto," kuqhubeka isibhengezo.
UCoinbase ukwathe oko "Silindele ukuvula i-ofisi ebonakalayo, e-Hyderabad, ukulungiselela abasebenzi base-Indiya njengoko iimeko ezinxulumene ne-Covid zivumela."
Okwangoku, inkampani ikwathumele ukuvulwa kwemisebenzi eliqela kwi-Linkedin, kubandakanya ne-15 yokuthumela izikhundla zomsebenzi e-India. Ngaphandle kwalonto, uCoinbase ubhengeze ukuvuleka kwemisebenzi kwamanye amazwe, kubandakanya i-US, i-UK, iJapan, iSingapore, iKhanada kunye nePhilippines. Ngapha koko, inkampani ityale imali kutshintshiselwano lwendawo yase-India.
Kwezinye iindaba, uCoinbase ulungiselela ukudweliswa esidlangalaleni kwiNasdaq ngomrhumo wokuqala woluntu (IPO). Nangona kunjalo, le IPO ibanjiwe kulandela isohlwayo sezigidi ezi-6.5 zeedola ezivela kwiKhomishini yoRhwebo yeXesha laseMelika (i-CFTC).
Ban yeDijithali yemali eIndiya
Isigqibo sikaCoinbase sokwandisa ukusebenza kwakhe eIndiya siza nekamva elingazinzanga lezemali kweli lizwe, nanjengoko urhulumente esandula ukubhengeza izicwangciso zakhe zokuthintela ukusetyenziswa kwemali kweli lizwe.
Kakade, i-cryptocurrency bill kwakufuneka ingeniswe ngexesha leseshoni yohlahlo-lwabiwo mali lwePalamente yaseIndiya. Nangona kunjalo, iseshoni iphelile ngaphandle kokuba i-bill iyaziswa.
Umphathiswa wezeziMali waseNdiya uNirmala Sitharaman.
Umphathiswa Wezemali wase-India, u-Nirmala Sitharaman, umthetho osayilwayo we-cryptocurrency usaqhubeka nokugqitywa kwaye uza kuziswa wakugqiba. Nangona kunjalo, waqinisekisa ukuba urhulumente akazukukhupha isibhengezo kwilizwe liphela kodwa uzakuthatha "Ulungelelwaniso lwendlela yokwenza umthetho we-cryptocurrency."
tags Coinbase, Cryptocurrency, Indiya , iindaba
I-India Central Bank iRamp-Up Injongo yayo yokuThintela ii-Cryptocurrensis kwilizwe
Ukuphazamiseka kwebhanki enguVimba yaseIndiya (RBI) kwimveliso ye-cryptocurrency iyaqhubeka nokukhula njengoko ibhanki ephezulu kutshanje ivakalise ukukhathazeka kwayo malunga nefuthe elinokubakho lokugcina imali kuqoqosho lwelizwe.
Kwangelo xesha, amalungu ebhanki aqinisekisile ukuba i-RBI iceba ukukhupha irhafu yedijithali.
Ibhanki ibambe ukungathandeki kwayo kwimizi-mveliso ye-crypto iminyaka ngoku kwaye yafudukela ukuthintela abathengi bayo ekusebenzeni nabaphi na abameli be-asethi yedijithali kwi-2018, eyayilingana nokuvalwa ngokuthe ngqo.
Nangona iNkundla ePhakamileyo yase-India yasusa isibhengezo kwi-2020, i-RBI iphindaphinde-ukuqaqambisa imiba enokubakho Bitcoin (BTC) kunye nezinye izinto ze-crypto. Umjikelo wamva nje wokudweliswa kwemicimbi kutsha nje uvela eShaktikanta Das, kwiRhuluneli yeRBI.
NgokukaBloomberg, umphathi uphawule ukuba ibhanki ephezulu iye yathumela ezi nkxalabo kurhulumente waseIndiya. Nangona wayethintele ukukhankanya iinkcukacha ezithile, wayekhe waxela kwangaphambili ukuba ukusetyenziswa kwezityholo zokwenza imali ngokungekho semthethweni kunye nezinye izinto ezingekho mthethweni kuye kwaphakamisa iiflegi ezibomvu ezininzi.
IRhuluneli yeRBI uShaktikanta Das. Umthombo: Google
Izimvo zerhuluneli ziyeza xa urhulumente wase-India exoxa nzulu ngokubeka isithintelo kuzo zonke i-cryptocurrensets zabucala. Ukuba uvunyiwe, umthetho uya kuthi ngokuzenzekelayo wenze ukuba ishishini lokugcina imali ngokungekho semthethweni libe semthethweni ngaphakathi kwemida yaseIndiya.
Ibhanki ePhambili-ikhutshwe ngeRupee
Ngelixa urhulumente wase-India kunye ne-RBI besacinga ngeendlela zokuphelisa i-cryptocurrensets kweli lizwe, omabini la maqela nawo enza izicwangciso zokukhupha imali yebhanki eyidijithali (CBDC).
Nangona kungekho mhla okanye nkcukacha zichaziweyo okwangoku, uDas uqinisekisile ukuba ibhanki isebenza ngokukuko.
Ngale ngqwalaselo ye-CBDC, i-RBI ijoyine uluhlu lwamanye amazwe abalekela kwinjongo enye. Okwangoku, iBhanki yaBantu yase China (PBoC) yeyona nto iqhubele phambili kakhulu kule nkalo.
Uqoqosho lwesibini ngobukhulu emhlabeni luvelise i-beta CBDC, ethi ivavanye ukuvavanywa kwabantu abaninzi kwimimandla eyahlukeneyo. Ngokwe-CNBC, olona vavanyo lukhulu lwe-CBDC kweli lizwe luya kwenzeka kumazantsi-ntshona esixeko saseTshayina i-Chengdu kulo nyaka.
Abemi bayakhuthazwa ukuba bathathe inxaxheba kwi-lottery ye-200,000 yevawutsha, nganye ixabisa phakathi kwe- $ 27 kunye ne- $ 37.
tags Cryptocurrency, Indiya , RBI
Iinethiwekhi zeendaba zibonelela ngohlaziyo kwinkqubela phambili yeBhili yeDijithali yemali yaseIndiya
Ukuhlaziywa: 14 Februwari 2021
Urhulumente wase-India usondela ngokukhawuleza ekungenisweni komthetho osayilwayo we-cryptocurrency ePalamente. Kwiveki ephelileyo, i-CNBC TV18 kunye neBloombergQuint zichaze ngemeko yetyala kwaye zeziphi iingxoxo ezenziwa ngurhulumente waseIndiya.
NgokukaBloombergQuint, "I-India izakuqhubeka nokuthintela ngokupheleleyo utyalo-mali kwii-cryptocurrensets ngelixa ibonelela abatyali mali abakhoyo ixesha lotshintsho lokuphuma ... oko kungabandakanya ukunqunyanyiswa kokusebenza ngokuthe ngqo ngotshintshiselwano lwangaphandle." Upapasho lubonisiwe "Igosa eliphezulu kwicandelo lezemali elingazichazanga igama." Igosa elingachazwanga longeze ngelithi ukuvalwa akuyi kuba linyathelo elichanekileyo kodwa oko "Abatyali mali be-cryptocurrency bazakunikwa ixesha lotshintsho kwiinyanga ezintathu ukuya kwezintandathu emva kokuphunyezwa komthetho omtsha wokuphelisa utyalo-mali lwabo."
Eli gosa likwaphawule oko "Umthetho omtsha wase-India uza kulandelwa kulawulo lwase-China, oluye lwayekiswa ngokufanelekileyo urhwebo kunye nokusetyenziswa kwemali ye-cryptocurrency, ngelixa urhulumente esebenzela ukukhupha imali yakhe ebonakalayo."
Iakhawunti ye-CNBC TV18
Enye ingxelo evela kwi-CNBC TV18 iqaphele oko "Imithombo icebisa ukuba urhulumente axoxe ngemithetho-sikhokelo ye-Indian cryptocurrency, kwaye inokwenzeka ukuba ichaze iindlela zokuziphatha kungekudala." Intatheli evela kwi-CNBC TV18, uTimsy Jaipuria, ubonakalisile ukuba imigaqo iyakugqiba "Ixesha eliza kunikwa lokurhoxisa imali ekhoyo ekhoyo."
Ukwathe isikhokelo siza kuqinisekisa ukuba iReserve Bank of India (RBI) izakufumana njani ixabiso kwimali yaseburhulumenteni yaseIndiya kunye nezohlwayo zabo basilelayo ukuthobela imigaqo ebekiweyo.
I-Cryptocurrency kunye noMmiselo weBhili yeDigital yaseburhulumenteni eyi-2021 iya kwaziswa eLok Sabha, indlu esezantsi yePalamente yase-India, ngexesha leseshoni yePalamente yangoku. Oko bekuthethile, kukho izandi zokuba urhulumente wase-India uceba ukukhawulezisa umthetho oyilwayo ukuthintela ukusetyenziswa kwemali kweli lizwe.
I-Ripple isungula iNkqubo-sikhokelo yoLawulo yokuSebenzisa e-India kulandela umngcipheko we-Crypto Ban
Ukuhlaziywa: 19 Juni 2020
Inkampani ephambili ye-blockchain kunye nenkampani egxile kubuchwephesha bezemali, iRipple ikhuphe iqonga lokusetyenziswa eIndiya, njengoko ilizwe liceba ukuvala i-cryptocurrency ngokubanzi.
I-Economic Times ityhila isindululo sase-India sokuthintela ukutshintshiselana nge-cryptocurrency ngolwesiHlanu, nge-12 kaJuni. URipple waseka isikhokelo sezopolitiko ukuphendula, efuna ukuthintela abalawuli baseIndiya kuthintelo.
Olu xwebhu lwenkqubo lunesihloko esithi "Indlela eya phambili yokuThathwa kweempahla zeDijithali eIndiya" Ukusetyenziswa kwezinto zexabiso ledijithali, ezinje ngeXRP, kuqoqosho lwaseIndiya kunika izibonelelo, ngokwengxelo yeendaba eyenziwe nguRipple. Ikwacebisa "inkqubo-sikhokelo yolawulo lweeasethi zedijithali ngokulungisa ngokuthe ngqo imithetho yecandelo lezemali- umzekelo, ukunika i-Indian Securities and Exchange Board (i-SEBI) ukongamela ilayisensi, ukulawula, nokongamela ababoneleli beenkonzo zedijithali," utsho eposini .
Olu xwebhu lukhankanya i-XRP njengeyona "meko iphambili ekusetyenzisweni kwentlawulo enqamlezayo kunye nokudluliselwa kwemali." Oku kugxininisa inzuzo yeXRP ngaphezulu kwabadlali abakhulu be-crypto njenge-BTC kunye ne-ETH. Ezinye izikhombisi (ngentengiselwano) ezisetyenzisiweyo kuthelekiso bezisantya (imizuzwana eyi-3.6), indleko (i-0.0004 yeedola), kunye nokusilela (i-1500 TPS).
Okwangoku, kukho ukudideka okuninzi malunga nokuba semthethweni kwe-crypto e-India. Nangona ibhanki ephezulu yaseIndiya iyivalile i-cryptography kwiibhanki zalapha, i-Reserve Bank yase-India ibanga ukuba i-cryptography isemthethweni. Ukuba yamkelwe, iRipple eIndiya iya kuyonyusa kakhulu imali yayo yentengiso.
Ukurhangqa okujolise kwimarike yaseIndiya njengoko iTether yankqonkqoza ngaphandle kweXRP
Isindululo sokumiswa kwe-Ripple e-India safika kwakamsinya emva kokuba i-XRP iphulukene nesikhundla sayo njengeyona mali yesithathu ngobukhulu ngokubhekisele kwiimali zentengiso. Njengokuba kuchaziwe kutshanje ezindabeni, uMajor Stablecoin Tether (USDT) wayigqwesa i-XRP kwaye waba ngowesithathu ngobukhulu kwi-cryptographic ngoqoqosho lwentengiso.
Ngexesha lokupapashwa kumaphephandaba, i-XRP yayinemali eyimali yentengiso ye- $ 8.3 yezigidigidi kunye nesabelo seTether se- $ 9.2 yezigidigidi.
tags Indiya , Ripples, Ukhuseleko kunye neBhodi yoTshintshiselwano yaseIndiya (SEBI), Ukumisela, XRP